चुनावमा जन्ती हुने कि जनता ?
विचार चुनावमा जन्ती हुने कि जनता ? डा. अतीन्द्र दाहाल
बाह्रखरी - मंगलबार, मंसिर ५, २०७४
देश चुनावमय भएको छ । प्रदेश सभा र संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको चुनावसँगै संघीय गणतन्त्रको कार्यन्वयन सुरु भयो । आसन्न निर्वाचनले पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेछन् । निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि महत्वकांक्षी घोषणापत्र सार्वनजिक गरेका छन् । घोषणापत्रको आधामात्रै कार्यान्वय भए पनि नयाँ नेपाल सार्थक बनाउन सकिन्छ । सबैको आशा छ, निर्वाचनपछि देशले सकारात्मक गति लिनेछ ।
देश निर्माण गर्न सफल प्रतिनिधि चुन्न जनता पनि सजग बन्नुपर्छ । राजनीतिमा नागरिक सहभागिता ३ विशिष्ठ र फरक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ । नागरिकहरू पहिले जन्तु, त्यसपछि जन्ती र अनिमात्र जनता बन्छन् । हामी पनि पहिले जन्तु अनि केही कालदेखि जन्तीको हिसाबले राजनीतिमा छौँ । क्यानाडेली शोधकर्ता जेनिफर ट्यांगका अनुसार पूर्वीय तटका देशहरूमा राजनीतिक सहभागिता अझै अवैज्ञानिक देखिन्छ । बेँग ह्वाउट क्लको पुस्तक ‘इलेक्सन इज पपुलर कल्चर इन एसिया’को मतसमेत समान छ । यसले लभगभ २० प्रतिशत मतदाताले मात्र सोच÷विचारसाथ मतदान गर्ने देखाएको छ ।
डोनाल्ड जी फेरीको पुस्तक ‘डिसिजन एन्ड इलेक्सन : एक्सपेक्टिङ द अनएक्सपेक्टेड’ अनुसार दलका कार्यक्रम र तीनले ल्याउने परिणामको मूल्यांकनका आधारमा राजनीतिक माताधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ । छलफल र अनुसन्धानात्मकभन्दा परम्परागत विधिको प्रयोग बढी हुन्छ । अनि अधिकांश निर्वाचनले नसोचेका परिणाम बढी ल्याउँछन् । हाम्रो अवस्था पनि यही हो । अब यस कमजोरीबाट माथि उठ्दै सबल जनता भएर राजनीतिक सहभागिता देखाउनुपर्छ ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासका सुरुका वर्षमा हाम्रो राजनीतिक सहभागिता जन्तुको जस्तोे भयो । निर्वाचनको केही दिन पूर्व नेताहरूले सहयोगीमार्पmत् भोजभतेर र खानपिन गराएर नागरिकलाई प्रभावित गर्थेे । गरिबी, अशिक्षा र राजनीतिक चेतना नभएका नागरिक जसले २ पैसा अथवा २ —४ छाक खान दियो उसैको जयजयकार गर्थे । उसैले भनेबमोजिम मत दिन्थे । नोट र भोटको नाता सघन देखिन्थ्यो । यस्तो गलत परिपाटीबाट आएका प्रतिनिधिले जनताको भलाइ सोच्दैन थिए । निर्वाचनअघि र पछि दुवै समय उनीहरूको ध्येय झुक्याउनेमात्रै रहन्थ्यो । जन्तुलाई जस्तो खान दिएर नागरिकलाई आफ्नो बसमा केही समय लिन्थे र काम सकिएपछि छोडिदिन्थे । थुप्रै अविकसित देशका निर्वाचनमा अभैm यस्तै स्थिति देखिन्छ ।
राजनीतिक सहभागिताको दोस्रो चरणमा मानिसहरू जन्तीको स्तरमा पुग्छन् । अहिले हामी यही चरणमा छौँ । जन्ती विवाह समारोहमा बेहुलासँग उसको सहयोगार्थ खटिन्छन् । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बेहुलालाई सुरक्षित र बेहुलीको साथमा घर पु¥याउनु तिनको जिम्मामा हुन्छ । विवाह अवधिमा भएका जायज/नाजायज कुरामा उनीहरू जहिल्यै बेहुलाको पक्षमा बोल्छन् । जतिसुकै राम्रो तयारी गरे पनि यो वा त्यो नभएको भनेर बेहुली पक्षलाई कमजोर देखाउनु तिनको ध्येय नै हुन्छ ।
हामी अहिले विभिन्न पार्टीका जन्ती भएका छौँं । आफ्नो पार्टीको वकालत गर्दै अरूलाई कमजोर देखाएर उनीहरूकोे विपक्षमा कुरा गर्दैछौँ । आफ्नो नेताको विजयका लागि विवाद, झगडा वा जुनसुकै रामरमितामा सुखीसाथ ओर्लन्छौ । अन्धभक्त जन्ती भइरहेका छौँ । सामान्य र अनपठ मानिसमात्र हैन यहाँ त लेखक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक, कलाकार, पेसाकर्मी सबैले कुनै न कुनै पार्टीका संगठन बनाउँदै सक्रिय कार्यकर्ता भएर उभिन्छौँ । आफू संलग्न पार्टीले भने जे पनि प्रजातान्त्रिक, जनभावनाअनुसारको अग्रगामी अनि प्रगतिउन्मुख भन्छौँ ।
अन्य पार्टीबाट आएका विचारलाई राम्रै भए पनि अनेकौं कटाक्ष गर्छौँ । अनि शक्तिमा भएकाहरू सार्वजनिक र विशेषगरी सरकारी संचार माध्यमसमेत दरुपयोग गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्छन् । कुनै पार्टीको सदस्यताबिना स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा रहने त कसैलाई रुचि वा अनुभव नै नभएजस्तो हुदैछ । केही लेखक भन्छन् — नेपालमा त जनता कोही छैनन्, सबै कार्यकर्तामात्र छन् । संभ्रान्त देशका सुसंस्कृत राजनीतिमा यस्ता अभ्यास देखिँदैनन् ।
जन्ती संस्कारले नेता जतिसुकै विकृत र भ्रष्ट भए पनि नागरिकलाई उसकोे विरोधमा जान सिकाएकै हुँदैन । यस्तो राजनीतिक सहभागितामा प्रतिनिधिहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी रहँदैनन् । त्यसैले आन्दोलनमा सरोकार नै नभएका वा प्रदेश विवादका नाममा देश नै परदेश हुनसक्ने अति जोखिमका विषयमा पनि नेतृत्वको विरोध गर्ने ल्याकत देखिँदैन । घरका सदस्यभन्दा पाहुनाको सामथ्र्य अनि सम्मान बढी हुने विषयमा समेत प्रतिवाद हुँदैनन् ।
जन्तु वा जन्तीरूपीे राजनीतिक अभ्यासले नागरिकका इच्छा÷आकांक्षा पूरा हुँदैनन् । लेखक ऐ हेवुडका अनुसार यी दुवै सहभागिता राजनीतिलाई सही बनाउन कम उत्प्ररेणादायी हुन्छन् । नेताहरू नागरिकका लागि सकरात्मक काम गर्न बाध्य हुँदैनन् अनि चाहँदैनन् ।
जनता बन्ने खाँचो
राजनीतिक सहभागिताको उच्च समयमा नागरिक जनता हुन्छन् । भाषिक हिसाबले पनि जन्तु र जन्तीमा आधा र जनतामा पूरा न लेखिन्छ । जनता हुदाँ नागरिकहरू कुनै दल वा नेताको अन्धभक्त नभई उसको कार्यक्रम, नेतृत्व कौशल अनि क्षमतालाई मूल्याकंन गर्छन् । हाम्रोभन्दा राम्रो छनौट चाहन्छन् ।
जनताले प्रतिनिधिलाई उसको क्षमता, सोच, देशप्रतिको चिन्तन र अठोटका विषयमा मूल्याङ्कन गरेरमात्र सही वा योग्य मान्नुपर्छ । नेताले गलत गरे सामाजिक बहिष्कार र असहयोग गर्नुपर्छ । देशप्रति बेइमानी गर्नेलाई अहिंसात्मक तबरबाट दुत्कार्न सक्नुपर्छ । स्वतःस्फूर्त आन्दोलनबाट यथास्थितिको प्रतिस्थापन गर्ने साहस राख्नुपर्छ ।
नागरिक समाज तथा सञ्चार गृहले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । फोड्ने हैन, जोड्नेलाई रोज्नुपर्छ । नेतृत्वको विकास तथा समृद्धिका ठोस योजना अनि त्यसलाई सार्थक गर्न सक्ने ल्याकतका आधारमा मतदान अधिकारको सचेत सदुपयोग गर्नुपर्छ । लेखक माइकल एम विलसन् आफ्नो पुस्तक ‘इभ्री डे प्राब्याबलिटी एन्ड स्टाटिस्टिक्स’मा चुनावमा बाँकी प्रत्येक दिनका लागि असीम सम्भावना भएको बताउँछन् । त्यसलाई मतदाताले सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
विकसित देशका नागरिकले नेतृत्वलाई नीति हेरेर मूल्याकंन गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । कुनै पार्टीगत मतभेद नराखी सिंहापुरका नागरिकले ली क्वानलाई निरन्तर ३ दशक समर्थन र सहयोग गरे ।
महाथीर वीन महोमदलाई पहिले तानशाह भनियोे तर उनका कामका आधारमा समस्त मलेसिया नतमस्तक रह्यो । आधुनिक मलेसियाका पिताको रुपमा श्रदा बन्यो । नरेन्द्र मोदीको गुजरात मोडल हेरेर जनताले प्रधानमन्त्रीमा जिताए । अमेरिकाको क्षमता तथा सामथ्र्य बढोत्तरी गर्ने योजना दिएकै कारण डोनाल्ड ट्रम्पलाई अप्रत्याशितरूपमा त्यहाँका नागरिकले रुचाए । नागरिक पार्टीको हैन, उसका कार्यक्रमको हुन्छ । बाराकओबामाको स्वास्थ्य नीतिमाथि उनकै पार्टीको विमति थियो । ड्भाभिड क्यामरुनले भन्दैमा बेलायती नागरिकले युरोपियन युनियनमा रहन मानेनन् । नेता हाम्रो कि अर्काको भन्दा पनि नीति कस्तो भन्ने मूल्यांकन गरेर जनताले समर्थन वा विरोध गर्ने गर्छन् ।
जनताको हैसियतमा नागरिक रहदाँ पार्टीसमेत सचेत रहन्छन् । कुनै पनि बेला नागरिकको समर्थन समाप्त हुने भयले राम्रो गर्न खोज्छन् । तर यहाँ वर्षौंसम्म एउटा नागरिक एउटै पार्टीको हुन्छ । भोटर मात्रै भए पनि हामी कार्यकर्ता बन्दैछौं। नेतृत्वको निष्पक्ष र स्वतन्त्र मूल्याकंन गर्न चुक्तैछौं । सोचिएको सम्मुन्नति मृगतृष्णा बन्नुमा पनि विगतमा हामी जनता नभई जन्तु वा जन्तीमात्र हुनु कारक हो ।
सकरात्मक परिणामका लागि जन्तु वा जन्ती नभई नागरिकले जनता भएर राजनीतिक अभ्यास गर्नुुपर्छ । नेतृत्वको सबलता अनि विकास कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्नुपर्छ । देशको विकास र विनाश चाहनेलाई प्रस्ट चिन्नुपर्छ । नागरिकलाई जनता बन्न÷बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ । देशले त्यतिखेर मात्र प्रगतिको यात्रा आरम्भ गर्नेछ ।
सह–प्राध्यापक, काठमाडौ स्कुल अफ ल
मंगलबार, मंसिर ५, २०७४ मा प्रकाशित
२ मिनेट पहिले